Why if you don't do accounting? — Balance Professional Services
စာရင်းအင်း သေချာမလုပ်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာ တိကျသော စာရင်းတွေ၊မှတ်တမ်းတွေ ရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ် ဆိုတာ ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ စာရင်းတွေတိတိကျကျ ရှိခြင်းဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ထင်ထားသည်ထက် အများကြီး အကျိုးပြုပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် စာရင်းတွေ တိတိကျကျ မရှိရင်၊ စာရင်းတွေမနိင်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ? စာရင်းအင်းသေချာမလုပ်ရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အဲ့အထဲကမှ သိသိသာသာ ရိုက်ခက်တဲ့ ပြဿနာအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Performance စွမ်းဆောင်ရည် မသိနိုင်ခြင်း
ဒါကတော့အကြီးမားဆုံး ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေပြီး လစဥ် စာရင်းချုပ်တွေမရှိလို့ လုပ်ငန်းအခြေအနေက တိုးတက်နေလား ဆုတ်ယုတ်နေလား မသိ၊ တိုးတက်နေရင်ကော လစဥ် တိုးတက်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိမှန်းမသိ။ ဒီလိုသာဆိုရင် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး Sustainable ဖြစ်မယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ဟာ အတော်ခဲယင်းပါလိမ့်မယ်။
စာရင်းများ တိတိကျကျ မရှိခြင်းကြောင့် ရရန်ရှိသော ငွေကြေးများ / Receivables ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များ၊ မိမိကုန်ပစ္စည်း ဈေးကွက်ထဲသို့ရောက်ရန်သုံးရသည့် ကုန်ကျစရိတ်များ။ Marketing & Advertising အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ စသည်တို့ကို တိတိကျကျသေချာမသိရှိခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် လိုအပ်ငွေ မည်မျှရှိပြီး ငွေမည်မျှသုံးလျှင် မည်မျှမြတ်မည်၊ အရှုံးအမြတ်မည်မျှရှိမည် သိနိုင်ရန်ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မလိုအပ်သော သုံးစွဲငွေများ၊ ငွေယိုပေါက်များကိုလည်း Accounting System ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့အခါ သတိမမူမိပဲ တတိတိနဲ့ လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
လုပ်ငန်းကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ချင်တဲ့ အခါ စာရင်းမှတ်တမ်းများ တိတိကျကျ မရှိရင် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်း မြတ်နေသလား ရှုံးနေသလား မသိဘဲနဲ့ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ မိမိလုပ်ငန်းရှိ ငွေများသည် ကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်ဝင်နေသလား၊ ရောင်းအားကောင်းသော်လည်း ပေးရန်အကြွေး များနေပြီး ရစရာရှိသည့် အကြွေးများ မည်မျှရှိ၍ ဘယ်သူက အချိန်ကာလ ဘယ်လောက်ကြာနေသလဲကို တိတိကျကျ မသိဖြစ်နေလျှင်လည်း လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရန် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုရောင်းချမယ် ဆိုရင်တောင် စာရင်း မရှိရင် တန်ဖိုးတစ်ခု သတ်မှတ်နိုင်ရန် ခက်ခဲပါတယ်။
Business Plan ရေးဆွဲရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း
တိကျသော စာရင်းဇယားတစ်ခု မရှိဘဲနဲ့ Business Plan တစ်ခုရေးဆွဲရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ Business Plan ဆွဲရာမှာ ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ၊ အရှုံးအမြတ် စာရင်းများကို တိတိကျကျ သိမှသာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ Business Plan တစ်ခုရလာမှာပါ။
SME Loan or Bank Loan များ လျှောက်ထားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
တိကျမှန်ကန်သော စာရင်းများ မတင်ပြနိုင်ပါက SME loan များ၊ Bank Loan များ ရနိုင်ရန် ခက်ခဲပါတယ်။ မည်သည့် Bank မှ စာရင်းတိတိကျကျ မရှိသော၊ ရေးသွင်းမှတ်သားခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်း တစ်ခု ကို ချေးငွေများ ချပေးမည် မဟုတ်ပါ။
စာရင်းအင်း မရှိခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာကတော့ ဝန်ထမ်းတွေ ငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ထားခြင်းကို လွယ်လွယ်ကူကူ မသိရှိနိုင်ခြင်းပါ။ ထိုသို့ အလွဲသုံးစားပြုခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းသည် မြတ်သင့်သလောက်မမြတ်ဘဲ ထိုအမြတ်အစွန်းများသည် လုပ်ငန်းအပြင်သို့ ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့နိုင်သော်လည်း အချိန်ကာလကြာသည်အထိ မတိုးချဲ့နိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲလိုပြဿနာများသည် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ငန်းကို နစ်နာထိခိုက်စေပါတယ်။
ဒါကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ သေးသည်ဖြစ်စေ Accounting ပိုင်းကိုသေချာ Format ချပြီးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
ထက်ခိုင် (Business Development) , ကိုရဲ (Client Success)
Management Accounting in Businesses